प्रेस संगठनको भक्तपुर संयोजकमा हेमराज ढकाल र सहसंयोजक अञ्जना शिल्पकार
भक्तपुरः प्रेस संगठन नेपालले उपत्यकाका जिल्लामा आफ्नो संगठन पुनःगठन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश कमिटीको बैठकले तीनै जिल्लाको संगठन पुनःगठन गरेको हो । पुनःगठित संगठनको भक्तपुर संयोजकमा हेमराज ढक...
दोगडकादार गाउँपालिका– ७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको ‘भेजाइनल स्वाब’ काठमाडौं पठाइएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका गरिएकी उनको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्र...
काठमाडौैं । नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नाघेको छ । देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन् । गत वर...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस निकट संस्थाहरुको प्रदर्शन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरुले शनिबार देशभर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शुभेच्छुक संस्थाले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ...
अदालतको अवहेलना मुद्दामा अध्यक्ष दाहाललाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । दाहाल...
२० औं पटक आमरण अनसन बस्ने डा. केसीको घोषणा
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले २० औं पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । उनले दुईबुँदे माग अघि सार्दै फागुन १२ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘आगामी कै...